ခင်ဗျားလွန်သလား Rurouni Kenshin ? – REDPlayer
Samurai X အကြောင်းသိတယ်မဟုတ်လား? ok.. လောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းလို့မှတ်ပါ…
ကာတွန်းပန်းချီဆရာ Nobuhiro Watsuki ဟာကလေးညစ်ညမ်းပုံလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွဲချက်တင်ခံထားရ တယ်လို့မနေကသတင်းတွေတက်လာပါတယ်။ Samurai X ရဲ့ ဖန်တီးရှင်ပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ Watsuki ရဲ့ နာမည်ကြီးကာတွန်းကိုရပ်ဆိုင်းရမယ့် အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ လောလောဆယ်တော့ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေ ရပ်သွားပါတယ်။
Rurouni Kenshin ထုတ်ဝေသူ Shueisha ကတော့အခုလိုပြောကြောင်း J-News ကသတင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။ “ သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးပါပြီ၊ကျွန်တော်တို့အလေးထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီ ဆရာကတော့ ကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေတာပါပဲ။ Jump SQ မှာလောလောဆယ် အခန်းဆက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ကတော့ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းမှာပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူး”လို့ပြောပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း Nikkatsu ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Movie network Neco Channel ကတော့ နောက်လာမယ့် Rurouni Kenshin ဇာတ်လမ်းတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ November 25th မှာတော့အဲ့ လိုင်း က live-action ဇာတ်ကား ၃ကားပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Rurouni Kenshin ဇာတ်လမ်းဖန်တီးသူ ဟာ ကလေးညစ်ညမ်းပုံပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပက်သက်လို့ စွဲချက်တင်ခံထားရတာကိုပရိသတ်တွေကနားလည်ပေးဖို့အဲ့ဒီ လိုင်းကိုယ်စား ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက တောင်းပန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီ စောက်တစ်လွဲ အသိတွေတကယ်သာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ RP အနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ creative ဖြစ်နေပါစေ၊ လုံးဝ (လုံးဝ) ကန့်ကွက်တယ်ဗျာ။ ဒီသတင်းက သမီး ကလေးလေးမွေထားတဲ့ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ တကယ်ကို စောက်တလွဲပါကွာ။
Samurai X အကွောငျးသိတယျမဟုတျလား? ok.. လောလောဆယျဖွဈပကျြနတေဲ့ကိစ်စတှအေကွောငျးလို့မှတျပါ…
ကာတှနျးပနျးခြီဆရာ Nobuhiro Watsuki ဟာကလေးညဈညမျးပုံလကျဝယျပိုငျဆိုငျမှုနဲ့စှဲခကျြတငျခံထားရ တယျလို့မနကေသတငျးတှတေကျလာပါတယျ။ Samurai X ရဲ့ ဖနျတီးရှငျပေါ့ဗြာ။ အခုတော့ Watsuki ရဲ့ နာမညျကွီးကာတှနျးကိုရပျဆိုငျးရမယျ့ အနအေထားဖွဈနပေါတယျတဲ့။ လောလောဆယျတော့ တဈခြို့ ကိစ်စတှေ ရပျသှားပါတယျ။
Rurouni Kenshin ထုတျဝသေူ Shueisha ကတော့အခုလိုပွောကွောငျး J-News ကသတငျးဖျောပွခဲ့တာပါ။ “ သတငျးကိုကြှနျတျောတို့ကွားပွီးပါပွီ၊ကြှနျတျောတို့အလေးထားတဲ့သတငျးဖွဈပါတယျ။ ပနျးခြီ ဆရာကတော့ ကွိုးစားပနျးစားလုပျနတောပါပဲ။ Jump SQ မှာလောလောဆယျ အခနျးဆကျဖျောပွခဲ့တဲ့ ကိစ်စ ကတော့ဒီဇငျဘာ ၄ ရကျထုတျမဂ်ဂဇငျးမှာပါလာမှာမဟုတျပါဘူး”လို့ပွောပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံကအကွီးဆုံးရုပျရှငျလုပျငနျး Nikkatsu ကပိုငျဆိုငျတဲ့ Movie network Neco Channel ကတော့ နောကျလာမယျ့ Rurouni Kenshin ဇာတျလမျးတှကေိုထုတျလှငျ့သှားမှာမဟုတျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ November 25th မှာတော့အဲ့ လိုငျး က live-action ဇာတျကား ၃ကားပွသသှားမှာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ Rurouni Kenshin ဇာတျလမျးဖနျတီးသူ ဟာ ကလေးညဈညမျးပုံပိုငျဆိုငျမှုနဲ့ပကျသကျလို့ စှဲခကျြတငျခံထားရတာကိုပရိသတျတှကေနားလညျပေးဖို့အဲ့ဒီ လိုငျးကိုယျစား ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက တောငျးပနျထားတယျလို့ဆိုပါတယျ။
အဲ့ဒီ စောကျတဈလှဲ အသိတှတေကယျသာရှိနမေယျဆိုရငျတော့ RP အနနေဲ့ ဘယျလိုပဲ creative ဖွဈနပေါစေ၊ လုံးဝ (လုံးဝ) ကနျ့ကှကျတယျဗြာ။ ဒီသတငျးက သမီး ကလေးလေးမှထေားတဲ့ ကြှနျတော့ အတှကျတော့ တကယျကို စောကျတလှဲပါကှာ။
Tags ninja samurai